May 2018 - Page 3 of 8 - Puntland Mirror Believable Media Website
May 24, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somalilnad ayaa ka qarxay deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool saakay saakay oo Khamiis ah, sida ay warsiadaha Puntland u xaqiijiyeen ilo-wareedyo ciidamada katirsan. Waxaa jira […]
May 23, 2018 Puntland Mirror 0
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Niman hubeysan ayaa xildhibaan katirsan Puntland ku dilay magaalada Gaalkacyo fiidnimadii caawa oo Arbaco ah, sida ilo-wareedyo ammaanka katirsan ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror. Cabdixakiin Macalin Daahir, oo ahaa xildhibaan katirsan Puntland […]
Galkayo-(Puntland Mirror) Gunman shot dead Puntland lawmaker in Galkayo town of Mudug region on Wednesday evening, security sources told Puntland. Abdihakim Moalin Dahir, a Puntland lawmaker was killed near classic hotel in Galkayo by armed […]
Laascaano-(Puntland Mirror) Kulan u dhaxeeyay masuuliyiin katirsan maamulka Somaliland iyo odayaasha dhaqanka ee magaalada Laascaano ayaa fashil ku dhammaaday, sida ilo-wareedyo lagu kalsoonaan karo ay u xaqiijiyeen warsidaha Puntland Mirror. Kulanka oo ay albaabadu u […]
May 22, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada ISIS ayaa sheegtay in askari katirsan ciidanka booliiska Soomaaliya ay ku dileen caasimada Soomaaliya ee Muqdisho maanta oo Talaado ah, sida ay sheegtay warbaahinta ISIS. Warbaahinta Acmaaq oo ku hadasha afka ISIS […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Gaari uu waday qof qarax isku xiray ayaa beegsaday kolonyo ciidan duleedka Muqdisho maanta oo Talaado ah, sida ay ku warantay wakaalada wararka Reuters, oo soo xiganaysa saraakiil booliis. Weerarka ayaa ka dhacay […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) A suicide car bomber hit a military convoy outside Mogadishu on Tuesday, Reuters news agency reported, citing police officials. The attack occurred in Afgoye, an agricultural district about 30 km northwest of Mogadishu, […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa ku amartay dadkeeda shacabka ah in aysan aadi karin deegaanka ay colaadu ka jirto ee Tukaraq. Bayaan xalay kasoo baxay guddiga difaaca Puntland ayaa lagu sheegay in dadka shacabka ah aysan […]
May 21, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweyne Ku Xigeenka Khaatumo ayaa sheegay in ay ku taageersanyihiin Puntland soo celinta gobolka Sool. Cabdule Maxamuud Cagalule oo shir saxaafadeed ku qabtay magaalada Garoowe maanta oo Isniin ah ayaa sheegay in ay […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wasiirka Arrimaha Dibada Soomaaliya ayaa sheegay in aysan jirin wax wada-xaajood ah oo ku saabsan muranka badda oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. “Kiiska dacwadda badda ee inaga dhexeeya Kenya, waxa uu inoo […]